Ciidamada AMISOM oo qarax xoogan lagula beegsaday deegaanka KM-4 ee magaalada Muqdisho. | JILYAALE_ONLINE
Ciidamada AMISOM oo qarax xoogan lagula beegsaday deegaanka KM-4 ee magaalada Muqdisho.
Qarax xooogan ayaa Maanta lagula beegsaday cutubyo ka tirsan ciidamada Uganda oo qeyb ka ah howl galka AMISOM, deegaanka KM-4 ee magaalada Muqdisho. Ciidamada AMISOM ee la weeraray ayaa rasaas fara badan ooda ka qaaday ka dib markii qaraxa la maqlay.
Goobta uu ka dhacay qaraxan ayaa waxaa soo gaaray ciidamo fara badan oo isugu jira Ethiopian iyo kuwa dowladda KMG ah.
Ciidamadaasi oo halkaasi baaritaano ka bilaabay iyagoo iska qab qabteen dadweyne halkaasi ku sugnaa oo isugu jira kuwa wadada iska marayay iyo kuwa halkaasi kuleh meela ganacsi, sida dad goob joogeyaal ay sheegeen.
Lama oga qasaaraha uu gestay qaraxan Maanta lagula beegsaday ciidamada AMISOM deegaanka KM-4 ee magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaan la ogeyn halka ay ula dhaqaaqeen ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia dadkii ay ku soo qab qabteen howl galadii ay ka sameeyeen deegaanka KM-4 markii halkaasi uu qaraxa ka dhacay kadib.
← Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) oo fariin qoraal ah u diray dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya.
Ra’isal wasaare Nuur Cadde oo lagu wado in uu Baarlamaanka horgeeyo wasiiradii uu dhowaan magacaabay. →